compression - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: Compression ကို
•ဖြေရှင်းချက်3•အတွက်စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးထိရောက်စွာအသုံးချ V-Nova နှင့် Metaliquid အကြားမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်• V-Nova ရဲ့ PPro နည်းပညာနှင့် Metaliquid ၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အောင်မြင်သောမီဒီယာ-တယ်လီကွန်းပေါ်ဆောက်နေချိန်မှာ 2020x ပိုမြန် detection နဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကန့်ကွက်ထက်ပိုပြီးဖွ IBC 2019 လန်ဒန်, ဗြိတိန်မှာသရုပ်ပြအယူအဆစီမံကိန်း၏ IBC Catalyst အစီအစဉ်ကိုသက်သေပြ - 24 စက်တင်ဘာလ ...
V-Nova ကိုအကောင်းဆုံးသတင်းမီဒီယာအတွေ့အကြုံများကို enable စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်း, ATSC ပူးပေါင်းမည်
* ကားမောင်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ATSC 3.0 စံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့ * ဗီဒီယိုချုံ့ကျွမ်းကျင်သူများက V-Nova စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုယျခန်ဓာကို join * Key ကိုရည်ရွယ်ချက် Intelligent မီဒီယာချုံ့သစ်ကို ATSC 3.0 ပို့ဆောင်ဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်, ဗြိတိန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ - 24 ဇွန်လ 2019 - V-Nova ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် သြဇာအဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ (ATSC) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် - ထို ...
UHD channel များကိုဖြန့်ဖြူးဘို့ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Compression ကိုဖော်ပြရန် MEASAT
MEASAT ကို Global Berhad ( "MEASAT") က Ultra High Definition (UHD) ဂြိုဟ်တုကျော်မူလတန်းဖြန့်ဖြူးဘို့ဖြတ်တောက်-အစွန်းချုံ့သရုပ်ပြ NovelSat နဲ့ V-Nova နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ယနေ့ဟန်ပြကြေညာခဲ့သည်။3ဇွန်လ - အဆိုပါနည်းပညာအသစ်သုံးခု (2018) ကြိမ် bandwidth ကိုငွေစုနှင့် 26 ထံမှ CommunicAsia 28 အတွက် MEASAT ရဲ့တဲမှာတိုက်ရိုက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်အထိပေးပါသည်။ MEASAT လည်းအချို့နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပါတယ် ...
အား NBC အိုလံပစ် Pyeongchang အတွက် 2018 အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Ericsson ကရွေးချယ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 8 - အား NBC အိုလံပစ်ခြင်း, အား NBC အားကစား Group ၏တစ်ဌာနခွဲ, ဖေဖော်ဝါရီလ 25 ကနေ PyeongChang, တောင်ကိုရီးယားနေရာယူသော XXIII အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ, ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဗီဒီယိုအလှူငွေဖြေရှင်းချက်ပေး Ericsson ကရွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကြေငြာချက်ခရစ္စတိုဖာ Connolly, ဂီယာအင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ Sr; ဒါရိုက်တာနှင့်အိန်ဂျယ် Ruiz, မီဒီယာ၏ဦးခေါင်းအားဖြင့်ယနေ့ခဲ့ ...
IBC 2017: mainstream မျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ဖောက်သည် streaming များဖြေရှင်းချက်ပေး V-Nova PERSEUS ချုံ့ပေါင်းစပ်ပြီး
V-Nova, Ltd. & mainstream ယနေ့ mainstream ရဲ့လာမယ့်မျိုးဆက် HYPERNODE ပေးပို့ကွန်ယက် V-Nova PERSEUS ™2များ၏ပေါင်းစည်းမှုကြေညာခဲ့သည်။ Video streaming စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေးပါပလီကေးရှင်းကိုဗီဒီယိုအပေါ်မှီခိုအများအပြားပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်အတူတီဗီ & မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းနှင့်တဘက်, ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် ပို. ပို. သိပ်သည်းအနှံ့ကိုအပ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အရည်အသွေးမြင့်, HD ကို content များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ရလဒ်များနှင့် ...
V-Nova & NGCodec တစ်ခုတည်း FPGA အပေါ်ကို real-time UHDp60 Perseus Plus အား HEVC encoding ကယျနှုတျတျော
ဖြေရှင်းချက်အပေါ် running - V-Nova, Ltd. & NGCodec®ယနေ့ software ကို HEVC ဆန့်ကျင်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာငါးဆယ်ကြိမ် (50x) အထိအကောင်းဆုံး-In-class ကို UHD ဗီဒီယိုကို interlacing ရှိနေပါသည်နှင့် encoding ကကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချအပ်တော်မူမည်ဖြစ်သောပူးတွဲ FPGA encoding ကဖြေရှင်းချက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ အမေဇုံက Web Services က (AWS) ။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုအများဆုံးအဆင့်မြင့်ဗွီဒီယိုချုံ့ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ထုတ်လွှင့်, အော်ပရေတာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး enable ပါလိမ့်မယ် ...
NAB ပြရန် 2017 မှာ V-Nova ရဲ့ Transformative နည်းပညာများလောင်စာမျိုးဆက်သစ်ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်း
အရာအင်အားကြီးအပြည့်အဝအဆုံးမှအဆုံးသို့က Ultra HD ကုမ္ပဏီ၏မျိုးဆက်သစ် V-Nova PERSEUS ™ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်း software ကိုဖြေရှင်းချက်၏ဆန္ဒပြပွဲများကြည့်ဖို့ပထမဦးစွာအခွင့်အလမ်း, IPTV, OTT မိုဘိုင်းဗီဒီယိုနှင့် VR / 360 ဗီဒီယိုကအမေရိကန် V-Nova ရဲ့အသစ်စက်စက်၏ပွဲဦးထွက်တွေ့ကြုံ အလှူငွေနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက် P.Link NAB ပြရန် 2017 V-Nova PERSEUS စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြ, ပစ်လွှတ်ကတည်းက V-Nova ၏ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ...
V-Nova Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ V-Nova PERSEUS ™ဗီဒီယို Compression ကိုအတူဆော့ဗ် codec ၏စစ်မှန်သောပါဝါဖော်ပြပေး
· 100 encoding ကရုပ်သံလိုင်းတိုးမြှင့်, 10 Mbps ထိ UHD ထုတ်လွှင့်ဖို့နဲ့သယံဇာတအရင်းအမြစ်အသုံးချကိုလျှော့ချ·ကျော်လွန်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကို kbps ကနေ V-Nova PERSEUS ™ဆော့ဖ်ဝဲကိုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှု, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် VoD များအတွက် quantifiable အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေး·လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အစာရှောင်ခြင်း incremental တိုးတက်မှုကယ်တင်တတ်၏အသစ်အခွင့်အလမ်းများကို accelerates သိပ်သည်းဆနှင့် chipset များတွင်ထံမှ browser များအတွက် V-Nova, Ltd. , တစ်ဦးမှထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ဖြတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေး ...
V-Nova Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဗီဒီယို Encoding ၏ဖြန့်ကျက်အားပေးပါရန်® SMPTE ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ယနေ့ပြုလုပ် Motion Picture & ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (SMPTE®), အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံထားပါတယ်အဖွဲ့အစည်း၏ Society ကလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် V-Nova, Ltd. , ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများအားဖွင့်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများကြံစည်အတွက်သူချင်းစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ join ဖို့။ V-Nova အဆိုပါ SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ် ...
လွတ်လပ်သောအကဲဖြတ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက် V-Nova PERSEUS ™ချုံ့၏အလားအလာပြ
သိသိသာသာလိုအပ်သောဒေတာများကိုနှုန်းထားများလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း V-Nova PERSEUS H.264 ထက်ပိုမိုမြင့်မား resolution ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်းဒေတာနှုန်းကပိုအသုံးပြုသူများအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးတိုးတက်လာသောအမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူတစ် high-definition အတွေ့အကြုံကနေအကြိုးပွုနိုငျဆိုလို။ optimized encoding က profile များကို network resources များကိုပိုမိုထိရောက်သောအသုံးပြုမှုပါစေ။ လန်ဒန်, စက်တင်ဘာလ 7, 2016 - V-Nova, Ltd. , ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ထုတ်ဝေထားပါတယ် ...
Bluefish444 Bluefish444 SDK ကိုမှ TICO Lightweight Compression ကိုထည့်ပေးသည်
Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ, IBC 2016 မှာ Bluefish Software Development Kit အတွက် intoPIX TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression များအတွက်ထောက်ခံမှုပြနေသည်။ အဆိုပါ TICO ပေါ့ပါး codec Bluefish444 ဖောက်သည်အမြင်အာရုံ Lossless compression နှင့်အတူ compressed လုပ်မထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ SMPTE RDD35 4K 60P တည်ဆဲ SDI အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ထွန်းသစ်စအိုင်ပီနည်းပညာများကျော်ပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ။ ...